Laba qodob oo saldhig u ah dowlad wanaaga Farmaajo iyo Kheyre - WardheerNews
Laba qodob oo saldhig u ah dowlad wanaaga Farmaajo iyo Kheyre
Muqdishu (WDN)- Soomaalidu dhamaan waxay isku raacsan tahay in nabad waarta la helo, islamarkaana la dhiso ciidan Qaran iyo dowlad tayo leh. Arimahan ayaa ahaa qorshayaashii iyo balan qaadyadii ugu waaweynaa ee uu Madaxweyne Farmaajo wakhtigii ol’olaha doorashada iyo ka gadaal ba markii la doortay uu balan qaaday. Haddaba:
1) Soo celinta dadkii horey loo soo tijaabiyay ee ku fashilmay in ay Soomaaliya ka saaraan ammni darrada, gaadhsiiyaana xasilooni yo horumar dhaqaale, miyay haboont tahay in dib loo soo celiyo?
Madaxweyne Farmaajo (bidix) iyo Xasan Kheyre
Tusaale: ma kula tahay in Cabdixakiim Fiqi oo laba jeer soo noqday Wasiirka Gaashaandhiga oo lagu xasuusto wax qabadkiisii ugu weynaa uu ahaa Dagaal Ooge Indho Cadde oo lagu tolay darajada Jeneraal (General), haddana ku jira ol’olaha ka mid noqoshada dowladda cusub, uu horseed u noqon karo dhisad iyo qorsha ciidan Qaran?
Maxamed Mukhtaar oo horey ula soo shaqeeyay dawladii Xasan Sheekh, ahaana wasiirka Macdanta iyo Batroolka oo heshiisyo aan la marin Baarlamaanka la galay shirkaddo shisheeye (shaddy deals), soo celntiisu ma tahay isbedel?
2) In lagu daro xildhibaanada Baarlamaanka labada Aqal, oo ay ka mid noqdaan wasiirada dowladda cusubi (double dipping), saameyn intee leeg bay ku tahay isku milmanka Golaha Baarlamaanka iyo dowladda?
Taasi oo luminaysa ama meesha ka saaraysa masuuliyadii Baarlamaanka ee aheyd la xisaabtanka dowladda. Arinka oo ku lid ah balan qaad uu sheegay Ra’iisal Wasaare Kheyre dhawaan oo ahaa in ay dhisi doonaan dowlad lala xisaabtamo.
Wakhtigan oo ay Soomaaliya ku jirto xaalad abaareed, oo in ka badan 6 milyan oo Soomaali ahi qarka u saaran yihiin macaluul. Maxaa Safiiraddii matalayey Soomaaliya ee qaylo dhaanta iyo qorshayaasha wax qabad looga baahnaa sida safaaradaha Soomaaliya ee
1) Qaramadda Midoobay iyo 2) Midowga Afrika Muqdishu dhex taagay? Ma kula tahay in ay leeyihiin xirfad iyo waayo aragnimo ay ku dejin ama odorosi karaan qorshayaal ay hordhigaan deeq bixiyayaasha iyo hay’addaha gurmadka oo hadda Soomaaliya u feejigan?
Arimahan aan ku xusnay labada qodob, ayaa ah kuwa haddi ay ku dhaqaaqdo dolwadda Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaare Xasan Kheyre dhabar jab weyn ku keeni doonta taageeradii iyo rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed ee isbdel doonka ah.
Haddaba iyada oo la filayo in dhamaadka bishan lagu dhawaaqo xubanaha Dowladda cusub, waxa kala caddaan doonta in Soomaaliya ay ka dhalatay dowlad isbedel doon ah iyo in ay tahay mid la hal maasha kuwii ka horeeyay (business as usual ).
Puntland War Saxafadeed: Khilaafka Soomaaliland
Tukaraq is NOT the Issue: It is the Wider SSC Occupation Dummy
Al-Shabaab raid Kenyan mosque, preach for hours
Puntland War Saxafadeed:…
Tukaraq is NOT the Issue: It…
Ethiopia pardons senior…
What I SAW: In Tiny Burundi, a Huge Vote May 27, 2018
After Snubbing Taiwan, Burkina Faso Establishes Diplomatic Ties With China May 26, 2018
The Look: Morocco’s D.I.Y. Dance Crews May 26, 2018
Berlin: Thousands gather for far-right AfD and counterrallies May 27, 2018
Israel begins building marine barrier along Gaza border May 27, 2018
Boats carrying Gaza patients set for bid to break Israel blockade May 27, 2018
Dozens Dead in Congo After Boat Capsizes May 25, 2018
Spain rescues over 400 migrants in Mediterranean May 27, 2018
Sonko maintains Miguna as deputy governor nominee May 27, 2018
Fathers on the spot over rape cases in Lamu May 27, 2018
Wardheernews Al-Shabaab raid Kenyan mosque, preach for hours...#Somalia #somali #Kenya